अनमोलमाथि के भूवनले हस्तक्षेप गर्छन् ? « Mazzako Online
अनमोलमाथि के भूवनले हस्तक्षेप गर्छन् ?
मिडियामा कम आउने भएकाकारण पनि, अभिनेता अनमोल केसीको बिषयमा सबैजसो जवाफ उनका पिता भूवन केसीले नै दिने गर्छन् । अनमोलको बिषयमा आउने स्क्यान्डलको जवाफ पनि भूवन नै दिन्छन् । यसैले पनि अनमोलको करिअरमा भूवनको हस्तक्षेप छ कि भन्ने खालको चर्चा बजारमा सुनिन्छ ।
अनमोलको फिल्म रोजाइमा पनि भूवनकै हस्तक्षेप हुने गरेको चर्चा फिल्म बजारमा छ । अनमोललाई लिने कुनै पनि निर्माताले आफूलाई पनि शेयरमा राख्नुपर्ने भन्दै भूवनले अडान लिने गरेको चर्चा नभएको होइन ।
तर, अभिनेता अनमोल केसीले आफूले फिल्मको निर्णय आफै गर्ने बताएका छन् । उनले, भूवन आफ्नो पिता भएको कारणले पनि सल्लाहा लिने गरेको बताए । तर, निर्णय आफूले नै गर्ने र पिताको कुनै हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् ।
यस्तै, अभिनेता भूवनले पनि अनमोल घरमा आफ्नो छोरा रहेको भन्दै उनलाई सल्लाहा दिने गरेको बताएका छन् । तर, उनको निर्णयमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने भूवनको भनाई छ । अनमोल केसी अभिनित फिल्म ‘कृ’ माघ २६ गतेबाट रिलिज हुँदैछ ।